डा नारायण खड्का परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त – Nepal Japan
नेपाल जापान ६ आश्विन १५:३६
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । पाँच दलको गठबन्धनमाा बनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले लामो समयपछि परराष्ट्रमन्त्रीमा डा. खड्कालाई सिफारिश गरेको हो ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गत असार २९ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम डा खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नवनियुक्त मन्त्री खड्कालाई आजै अपराह्न पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने कार्यक्रम रहेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले बताउनुभयो ।